Lapho Ukuze Thola Kwesokunxele Impahla Izindawo EJalimane? | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > Lapho Ukuze Thola Kwesokunxele Impahla Izindawo EJalimane?
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 06/03/2020)
Wokujikeleza kuyinto adventure oyinhloko kodwa kufanele sikwenze umthwalo khulula, ikakhulukazi layovers noma uma wena nje ngosuku khulula kwelinye yaseJalimane emadolobheni athandwayo. Sine lonke ulwazi oludingayo wena ngoba kwesokunxele izindawo umthwalo eJalimane ezintathu nemizi yalo eyinhloko, Berlin, Munich, futhi Hamburg.
Noma ngabe ukuya Oktoberfest eMunich, emi ukwesabe Brandenburg esangweni e Berlin noma reveling e Vibe beqembu Reeperbahn e Hamburg, lawa izindlela elula futhi elula kunazo ukuqinisekisa ukuthi imithwalo yakho ithathwe kahle ukunakekelwa ngenkathi ukuhlola.
Kwesokunxele Impahla Izindawo EJalimane: Berlin
Izikhumulo zezindiza Berlin
Ngezinye Tegel Isikhumulo sezindiza, uzothola kwesokunxele umthwalo sendawo Terminal A futhi avulekele nsuku zonke kusuka 5 nginguye 10:30 pm. Amanani uyokhokha ngeke ifane kusuka € 7.20 ukuze € 9.90 futhi incike ubukhulu isikhwama sakho. Ubude besikhathi yokugcina akanamkhawulo.
Ngesikhathi Schonefeld Isikhumulo sezindiza, uzothola kwesokunxele umthwalo sendawo Terminal D Ukufika. amahora zabo ziyisiliva ngeSonto kuya kuLwesihlanu, kusukela 7:30 nginguye 11:30 pm nangoMgqibelo kusukela 8 nginguye 6 pm. Amanani isukela € 4 kuya € 6 isandla imithwalo kanye € 7 kuya € 10 esijwayelekile umthwalo ihlolwe.
Kwesokunxele Impahla Izindawo Ngezinye Izincwajana zemininingwane Zokusebenzela
I lula zezitimela ngawe siwukuthi bangamalungu evulekile 24 amahora ngosuku, izinsuku eziyisikhombisa ngesonto. Abe-Central Isiteshi Sesitimela (Hauptbahnhof) lapho uzothola ikhabethe futhi itholakala epaki imoto ngaphandle kwesakhiwo esikhulu endaweni C.
Kuye ngobukhulu we eydijithali akudingeki wena, zibiza phakathi € 4 futhi € 6 ngosuku futhi isikhathi isitoreji esiphezulu kuyinto 72 amahora. Uma ukhetha ukuvakashela ihhovisi kwesokunxele umthwalo, kukhona eyodwa ukuvula nsuku zonke kusukela 6 nginguye 10 ntambama futhi yayo mayelana € 5 into ngayinye.
Ezinye iziteshi nge isitoreji eydijithali zihlanganisa Alexanderplatz, Ostbahnhof, Potsdamer Platz futhi Zoologischer Garten. Kulula ukuthola kwesokunxele izindawo umthwalo eJalimane!
Kwesokunxele Impahla Izindawo EJalimane: Munich
Izikhumulo zezindiza Munich
Munich Airport ukhetho best uma evakashele edolobheni. Isevisi Center ku-Terminal 1 ivuliwe 24 amahora kukhona indawo yesibili Terminal 2 kodwa abavula bavela 5 am kuya phakathi kwamabili nsuku zonke.
Ngeke ukhokhe phakathi € 5 futhi € 10, kuye ngokuthi ungakanani imithwalo yakho kanye nokuqukethwe kwakho. Hlola zezindiza’ iwebhusayithi phambi uvakasha ukuze uthole ulwazi lwakamuva kanye nezinye zezindiza for kwesokunxele izindawo umthwalo eJalimane.
Kwesokunxele Impahla Izindawo Ngezinye Munich Izincwajana zemininingwane Zokusebenzela
Ukugcina umthwalo Munich sika Central Station kuyoba nowesivunguvungu ngawe. Kukhona inala ikhabethe futhi kukhona izimpawu kalula siwathole. A eydijithali ejwayelekile kuyokulahlekisela mayelana € 4 ngelanga futhi elikhulu, suit-case eydijithali obujwayelekile mayelana € 6 nsuku zonke. Kukhona Nokho kwezithibelo umkhawulo angu-72.
nezinye iziteshi eziningi esuke ifakwe izindawo ezifanayo.
Kwesokunxele Impahla Izindawo EJalimane: Hamburg
Hamburg Izikhumulo zezindiza
Into kuphela Hamburg sezindiza. Ihhovisi Kwesokunxele Impahla isezingeni Terminal 2, level 1 Ukuhamba futhi ngoMsombuluko livulekele ngeSonto kusukela 4:30 nginguye 11 pm. Ngeke ukhokhe phakathi € 5 futhi € 25, zonke sincike usayizi. I emikhulu imithwalo yakho, ayanda Imali yakho, futhi sezindiza futhi uyala € 3 njengoba wesikhathi esisodwa processing Imali into ngayinye.
Ungakwazi ukugcina imithwalo yakho lapha isikhathi kungagcini ozimele futhi zizinhle ukuhlola phambili ngaphambi kokufika yakho. Qoqa njengoba ulwazi oluningi ngendlela ongakhona ngayo ngaphambi kokuhamba.
Njenganoma eziningi zezitimela eYurophu, wena enhlanhleni nge ikhabethe okuyizinto wonke kalula avulekele 24 amahora ngosuku. Izindleko Isilinganiso € 5 ngosuku futhi azikho imikhawulo usayizi.
Bremen eHamburg Izitimela
Hanover eHamburg Izitimela
Cologne eHamburg Izitimela
Amasevisi Private: I 'Airbnb' Ukuze Impahla
Kunezindlela izinkampani ezimbalwa aqashe uhlelo sifana nsé nesabantu ka-Airbnb, kuphela umthwalo. Udinga nje kuphela ukuba ukucinga indawo, ubhuka bese ushiye izikhwama yakho endaweni eqinisekisiwe ukuthi iyona elula kunazo ngawe. Kuyindlela engcono kakhulu yokuthola kwesokunxele izindawo umthwalo eJalimane.
Umshuwalense emananini futhi ziyahlukahluka kusuka inkampani inkampani. Futhi uyoba nokuthula kwengqondo izikhwama zakho ezandleni ephephile.
Lena yisevisi elihle kakhulu isitoreji okulula ukusetshenziswa futhi ontengo yakhe yayinqunyiwe ngempela okunengqondo. Ngeke ukhokhe isilinganiso esiphansi of € 5 esikhwameni ngamunye ngosuku. isikhwama sakho futhi oVikelwe iminyaka engaphezu € 800. Konke emananini.
Wena uvele useshe website yabo indawo eduze nawe. Uyobe ukwazi ukuzikhethela specific 'StashPoint' futhi uma uphonsa off izikhwama zakho, khombisa aphethe yakho isabelo sakho futhi ubhekene ihlelwa!
amasevisi afana ne- zalokhu zihlanganisa Nannybag futhi BagBnb. Lawa masevisi empeleni etholakalayo kulo lonke elaseYurophu futhi kalula usetshenziselwe Germany.
Lapho ngisendleleni nokugcina umthwalo kuyadingeka, kungcono njalo engcono uzilungiselele. Phinda uhlole yonke imininingwane bese uthole isixazululo ekahle wena uyaphi. Kungakhathaliseki lokho zezindiza, ukuqeqesha iziteshi noma usuhamba amasevisi nifty yangasese online, kungcono zonke eyayikhona ngaleso ngokuchofoza inkinobho. Happy umthwalo bese ugcine imali kwi athenge amathikithi esitimela ngemali yakho kanye nokusetshenziswa Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “Lapho Ukuze Thola Kwesokunxele Impahla Izindawo EJalimane?” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fleft-luggage-locations-germany%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / fr noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu.
leftluggage Munich trainjourney Tranride TrainStation Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelberlin travelgermany travelhamburg
Ukuhamba Ngezitimela, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Isitimela Sokuvakasha eHungary, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuvakasha eSwitzerland, Izikhangibavakashi Europe